Style - All Things Myanmar Burmese
Style - shweDarling.com Blog
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် လူသိများသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ပန်ဆယ်လိုသည် ၆၆ (ဃ)ဖြင့်အမှုဖွင့်ခံထားရမှုကိုဖြေရှင်းရန် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီက တာမွေရဲစခန်းသို့ရောက်ရှိလာပြီး တစ်နာရီနီးပါးကြာ ကိုယ်တိုင်အစစ်ခံချက် own statement ပေးခဲ့သည်။ Credit to ဓာတ်ပုံ -ဇော်မိုးလွင်/The Voice
ကျွန်တော်တို့ ကချင် မျိုးနွယ်စုမှ ရဝမ်လူငယ်လေးများ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားပြီး ပထမဦးဆုံး ရိုက်ကူး၊ သရုပ်ဆောင်ထားသော #ဂီလာ ( သူရဲကောင်း) လို့အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ၁၉၊၁၊၂၀၁၈ မှစပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ ဧရာရုပ်ရှင်ရုံမှာ အစပြု ပြသသွားမှာဖြစ်လို့ အားလုံး လာရောက်ကြည့်ရှု အားပေးကြပါဦးခမျာ 🤗🤗👌👌 ရန်ကုန်နှင့်မြို့ကြီးများမှ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်များမပါဝင်သည့်အတွက် ရုံတင်ခွင့်ရရန် အခက်အခဲရှိပေမယ့် နယ်ရုံကပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုက ကျွန်တော်တို့လူငယ်များအတွက် ဆက်လက်ကြိုးစားရန် တွန်းအားကြီးတစ်ခုဖြစ်စေမှာပါဗျာ 😇 😇 #Proud_to_be_Rvwang_in_Kachin #Special_thanks_to_whoever_Like_n_Share 😍
ဆရာဝန်မလေး ” ထွန်းပုလဲရတနာ ” Miss Myanmar International 2017(1st Runner) Miss Myanmar World 2016 ( Top.10) Miss Myanmar Yangon 2015
Posted in Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Knowledge Base | No Comments »
မှတပါး၊အခြားမရှိပြီ။ ။ အကယ်၍သာ၊မြန်မာပြည်မှာ၊အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ပုခုံးချင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ပါတီကြီး တစ်ခုများရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ဒီစာဟာ၊ရေးစရာလိုတဲ့စာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုတာ ပြည်သူ့ဆန္ဒသာ၊အခရာကျတာမို့၊ပြည်သူကသာဆုံးဖြတ်သွားမှာမို့ပါပဲ။ ……… အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရသက်တမ်း(၂)နှစ်ကျော်ကာလအရောက်မှာ၊အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်၊အားမရတာ၊မကျေနပ်တာ၊ပြစ်တင်ရှုတ်ချတာတွေတွေ့ လာရပါတယ်။အခုလတ်တလောထွက်ပေါ်နေတဲ့ပါတီဗဟိုကော်မီတီဝင်ဦးဝင်းထိန်ရဲ့ သားဖြစ်သူမင်္ဂလာဆောင်အခန်းအနားမှာပိုပြီးအသံတွေကျယ်လောင်လာပါတယ်။ မကျေနပ်ချက်၊ပြစ်တင်ရှုတ်ချချက်တွေမှာ၊မှန်တာလည်းပါနိုင်သလို၊မှားတာလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအစိုးရမို့၊ပြည်သူတွေအနေနဲ့၊ပြစ်တင်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်လည်း အပြည့်အဝရှိတာကိုလည်းလက်ခံရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီပြစ်တင်ရှုတ်ချဝေဖန်မှုတွေဟာပွဲလန့်ရင်ဖျာခင်းမဟဲ့ဆိုပြီးအသင့်ပြင်ထားတဲ့၊ အာဏာလက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့သူခိုးဓားပြအုပ်စုရဲ့၊ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကွက်ကျကျ၊ လှုံ့ဆော်သွေးထိုးမှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါ၊နိုင်ငံရှေ့ရေးဟာ၊အင်မတန် ရင်လေးစရာကောင်းလာပါတယ်။ အတိုက်အခံပါတီအဖြစ်နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်ခရီးကြမ်းကြီးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဟာ၊(၂၀၁၅)ရွေးကောက်ပွဲမှာ၊ဗြုန်းဆို သောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်လည်းရရော၊နေရာခွဲဝေရေးကိုဖုတ်ပူမီးတိုက်လုပ်ရပါတော့တယ်။ကြိုတင်ပြင် ဆင်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့၊အာဏာရှင်လက်ကိုင်တုတ်အုပ်စုပြုတ်ကျဖို့၊မဲအပြတ် အသတ်အနိုင်ရဖို့ဘက်ကို၊အားစိုက်နေခဲ့တာကြောင့်၊ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်တွေ၊ အများကြီးရှိခဲ့မှာပါပဲ။ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးတည်းက၊မနိုင်ဝန်ထမ်းခဲ့ရတာလည်း မြင်သာပါတယ်။ အခုတော့၊အဲဒီရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေထဲက၊အရည်အချင်းမပြည့်မီသူတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာလိုသူတွေ၊စုန်းပြူးတွေပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြ မလဲ။ပြည်သူလူထုဘာလုပ်ကြမလဲ၊ဆိုပြီး၊လူအများရဲ့စိတ်မှာဝေဝါးသွားနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှဘယ်အစိုးရအဖွဲ့မှာမဆို၊လူကောင်းတွေချည်းပါဝင်တဲ့အစိုးရ အဖွဲ့ရယ်လို့မရှိပါဘူး။အနည်းအများသာကွာတာပါ။သေချာပေါက်ပြောနိုင်တဲ့ အချက်ကတော့၊လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့မှာလူကောင်းများပါတယ်။သူမတူအောင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့၊မသမာမှုကိုအားမပေးတဲ့၊ရိုးဖြောင့်ပြီး၊အမြော်အမြင်ကြီးမား တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းလည်းရှိပါတယ်။ ဘာကြီးဖြစ်နေနေ၊မကြိုက်တော့ဘူးဆိုပါစို့။လာမဲ့(၂၀၂၀)ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုမဲပေးကြမလဲ။ကိုယ်စိတ်သန်ရာမဲပေးကြရင်ဖြင့်၊လူထုရဲ့မဲတွေဟာ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ၊မဖြစ်ညစ်ကျယ်ပါတီတွေ၊တသီးပုဂ္ဂလပါတီတွေ ဆီရောက်ပြီး၊မဲတွေကွဲသွားမှာအသေအချာပါပဲ။ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ဟာ၊ ဘယ်ပါတီမှအစိုးရဖွဲ့နိုင်မဲ့အနေအထားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအနေအထားမှာ၊အမတ်နေရာ(၂၅%)ကိုအသင့်ကိုင်ပြီးကျားချောင်းချောင်းနေတဲ့ စစ်တပ်နဲ့၊သူ့မိတ်ဖက်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပူးပေါင်း၊လိုအပ်တဲ့မဲအတွက်၊လူနည်းစုပါတီတွေ ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီးညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအစိုးရဟာ အာဏာရှင် မျိုးဆက်အစိုးရပါပဲ။ ဒါဆိုရင်၊အန်အယ်လ်ဒီပါတီနဲ့ကော၊ညွန့်ပေါင်းအစိုးရမဖွဲ့နိုင်ဘူးလားဆိုတော့၊ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်နည်းပါတယ်။အန်အယ်လ်ဒီဟာ၊မဲအနည်းစုရတဲ့ပါတီတွေနဲ့၊အပေးအယူ ညှိနိုင်းကြတဲ့အခါ၊စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ဖွတ်အုပ်စုလို၊အာဏာရရင်ပြီးရော၊တောင်းသမျှ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားမက်လုံးတွေ၊ပေးမဲ့ပါတီမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်က၊လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပြီးပါတီတွေဟာ၊ဒေါ်စုဆန့်ကျင်ရေး၊အန်အယ်လ်ဒီဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒတွေ ကိုင်စွဲလာကြတာမို့၊ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့နိုင်ဖို့ဆိုတာအလှမ်းဝေးပါတယ်။ ဒီတော့၊ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြန်ပြီးခေါင်းထောင် မလာနိုင်ရေးဟာအဓိကပါပဲ။လက်ရှိအခြေအနေကနေ၊တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ဖို့၊(၂၀၀၈)ခြေဥကိုပြင်နိုင်ဖို့၊လုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလတခုလိုပါ တယ်။ခြေဥမပြင်နိုင်မချင်းဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမပြီးဆုံးနိုင်ပါဘူး။အောင်ပွဲမခံနိုင် ပါဘူး။ […]
ဟာသသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး New Year ညက Club တွင် အမည်မသိလူအုပ်စုမှ ခေါင်းကိုသံဖိနပ်များဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကန်ခံရရာမှ ဦးခေါင်းတွင်အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ယမန်နေ့က ဆေးရုံတွင် ခွဲစိတ်ခဲ့သော်လည်း ဒဏ်ရာမှာပြင်းထန်လွန်းသဖြင့် ထိုဒဏ်ရာကြောင့် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဆေးရုံ၌ ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပါသည် Yell Htwe Aung Just passed away at the Hospital after he got hit by some people at New Year Party in Club ! https://www.facebook.com/yellhtweaung Credit – Ko Shine Win
ချစ်သူနဲ့ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲတော့မယ့် စန္ဒီမြင့်လွင် သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင် က မတ်လ ထဲမှာ သူ့ရဲ့ချစ်သူ သီဟလွင်နဲ့ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ နဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲတွေကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး စုလျားရစ်ပတ်မင်္ဂလာပွဲ ကိုတော့ နိုဗိုတယ်​ဟိုတယ်​မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာညစာစားပွဲ ကိုတော့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သာ အကျဉ်းချုံးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်း စန္ဒီမြင့်လွင်က ပြောပါတယ်။ စန္ဒီမြင့်လွင် တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးက ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ်ခွဲ ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Credit to popular Journal
G Fatt ၏ ၂၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲ ပရိတ်သတ်များနှင့်အတူ ကျင်းပ ဟစ်ဟော့တေးသံရှင် G Fatt ၏ ၂၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Waterboom တွင် ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သူ၏ပရိသတ်များနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းများ လာရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဓာတ်ပုံ – နေ၀န်းထက် Credit to Eleven media group
ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာအကုန်မှာ ကိုယ်လုပ်ဖြစ်တာက ဘုရားကျောင်းတွေရှေ့သွားပြီး ခရစ်စမတ်အတွက် ဆုတောင်းဝတ်ပြုလာကြတာ၊ ဘုရားကျောင်းကို မီးရောင်စုံလှလှလေးတွေ ထွန်းထားတာတွေ စိမ်ပြေနပြေ လိုက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားကိုဝင်းဦးကြီးလို အသက်ကြီးမှ နှစ်ခြင်းခံ ရေဖြန်းခံ လုပ်မလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လည်း သူတို့ယုံကြည်ရာသူတို့ ကိုးကွယ်ကြတယ်။ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ယုံကြည်ရာကိုယ် ကိုးကွယ်လျက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားကျောင်းရှေ့ရောက်သွားပြီး ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ သာသာယာယာ ဆောင်းညကလေးမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ရော ကြည့်လင်အေးချမ်းပြီး သူတို့ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးသလို လောကသားတို့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ဖြစ်စေတာကို ဘာသာမတူပေမယ့် ကိုယ်လည်း ထပ်တူခံစားလို့ရနိုင်တယ်လေ။ အဲ့သည်အတွက် ကိုယ့်မှာ သရဏဂုံညစ်နွမ်းလိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟဆိုတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေတောင် အခိုက်အတန့်အားဖြင့် ကင်းစင်နေပါသေးတယ်။ သူတို့ဘုရားသခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ ဘာဆုယူဆုတောင်းမှလည်း အလဲအလှယ် မတောင်းဆိုခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဒုက္ခသုက္ခအပေါင်းကို မကူညီ မကယ်တင် […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, Notes | No Comments »
“လှည်းတန်းနေ ကျောင်းသူများနဲ့ မိန်းကလေးအားလုံးအတွက် ” လှည်းတန်းလူကူးဂုံးတံတားမှာ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ကလေးတွေ မိန်းကလေးငယ်လေးတွေကို အတင်းလိုက်ဆွဲပြီး ပိုက်ဆံ့တောင်းကြတာ ၊ အဲဒီ့မှာ ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ဘုန်းကြီးအတုတွေ ဒကာမလေးလို့ အတင်းခေါ်ပြီး ဆွမ်းဖိုးဆို ပိုက်ဆံ့ညာတောင်းကြတာတွေ လူတိုင်းကြားဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။ ဒီစာကို ရေးရခြင်းက လှည်းတန်းဂုံးတံတားနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အများဆုံးဖြတ်ကူးနေကျဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကျောင်းဆင်းတော့ ထုံးစံအတိုင်းဂုံးတံတားပေါ်ဖြတ်ကူးတယ်။ City Express ဘေးဘက်ခြမ်း တံတားပေါ်က အောက်ကိုဆင်းဖို့ လှေကား သုံးထစ်လောက် နင်းအပြီးမှာ နောက်က အနီနဲ့ အနက်နဲ့ ကြားထားတဲ့ အင်္ကျီနဲ့ကလေးတစ်ယောက် အတင်းအော်လိုက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့ရှေ့မှာကာရပ်တော့ လှေကားပေါ်က ကျသွားလုလု အနေအထားပါ။ ကျွန်တော့ လန့်သွားတယ်။ အဲ့ကလေးပြေးဝင်လာတာထက် သူအောက်ကိုကျသေသွားရင် ပထမဆုံးကျွန်တော်အမှုပတ်ခံရမယ်။ ကျွန်တော့စိတ်ထင် အသက် ၄ […]
ရဲ တိုက် ။ ********* zarni zeya ပေါ်ပင် အကြောင်း လေး ပါပဲ ။ ဖတ်ကြည့် စေချင် ပါတယ် ။ မနေ့ က ရဲတိုက် လွတ် ပါတယ် ။ အရင် ကတည်း က ဘုကျ ကျ စတိုင် မျက်လုံး တွေ ထဲ အားထဲ့ သရုပ် ဆောင် တတ် တဲ့ သူ့ ကို သဘော ကျ ပါတယ် ။ ဦးကျော်ဟိန်း ကိုယ်စား ရ သလို လဲ ခံစားရ တယ် ။ သူ့ ဘဝ ကောက်ကြောင်း က လည်း ဦးကျော် […]
Posted in Beauties & Hunkies & Couples | No Comments »
Words with Maryit Za.
Model Su Aim San
Shwe Poe Eain’s cover photos
Model : Shwe Poe Eain Make Up : Ar Kar Kyaw Sunday Journal Cover
Aye Myat Thu having fun @ Beach